Kefzol (ကပ်ဖ်ဇိုးလ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Kefzol (ကပ်ဖ်ဇိုးလ်)
Kefzol (ကပ်ဖ်ဇိုးလ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Kefzol (ကပ်ဖ်ဇိုးလ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Kefzol (ကပ်ဖ်ဇိုးလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
KEFZOL® သည် Cephalosporin အုပ်စု ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်ပြီး ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သော ၊ ဆိုးရွားသည့် ကူးစက်ရောဂါများကို ကုသရန် အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။ ထို့ပြင် အခြားသောရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အသုံးပြုကြသည်လည်းရှိရာ သင်ထပ်သိလိုသည်များရှိလျှင် သင့်ဆရာဝန်အား မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Kefzol (ကပ်ဖ်ဇိုးလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
KEFZOL®ကို အသားထိုးဆေး၊ အကြောထိုးဆေး အနေနှင့် အသုံးပြုကြပါသည်။ အိမ်တွင် မိမိဖာသာထိုးမည်ဆိုပါက ဆေးအချိုးအဆနှင့် အသုံးပြုပုံကို ဆရာဝန်၊ သူနာပြူနှင့် ကျန်းမားရေးဝန်ထမ်းများကသေချာစွာရှင်းပြသည်ကိုနားထောင်ပြီးမှ အသုံးပြုပါ။ ဆေးမထိုးမီ ဆေးကိုပြင်းအားလျော့ရန် မိုးရေစသည်တို့ဖြင့်ရောစပ်နိုင်သည်။
ဆေးကို သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အထိသောက်ရမည်။ ရောဂါသက်သာလာသောကြောင့် ဆေးရပ်လိုက်ခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။ ယင်းသို့ပြုလုပ်ပါက ဆေးယဉ်သွားပြီး နောက်ထပ်ရောဂါပိုးများ ဝင်လာနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Cefazolin သည် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်သော တုပ်ကွေးရောဂါနှင့် အအေးမိခြင်းတို့ကို မပျောက်ကင်းစေပါ။
Cefazolinသည် သွေးနှင့် ဆီးထဲတွင်ရှိသော သကြားဓါတ်များကို ကမောက်ကမဖြစ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆီးချိုရောဂါ ကုသမှုခံယူနေပါက သင့်ဆရာဝန်အား Cefazolin သောက်နေကြောင်း အသိပေးထားရမည်။
ဆေးအမှုန့်ကို အခန်းအပူချိန်တွင် ရေငွေ့မပြန် ခြောက်သွေ့သော နေရာတွင်ထားပါ။
ဆေးဖျော်ပြီးချိန်တွင် ဆေးကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ၁၀ရက်ခန့်မျှထားနိုင်သည်။ ခဲမထားပါနှင့်။ ဆေးပေါ်တွင် ကပ်ထားသော ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။
ဆေးဖျော်ထားပြီး အခန်းအပူချိန်တွင် ၁ ရက်ထားနိုင်သည်။
Kefzol (ကပ်ဖ်ဇိုးလ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
KEFZOL®ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ KEFZOL®ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
KEFZOL®ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
KEFZOL®ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
KEFZOL®ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Kefzol (ကပ်ဖ်ဇိုးလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
KEFZOL®ထဲတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
ပင်နီဆလင် ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
Cephalosporin ပိုးသတ်ဆေးများ (Omnicef, Cefzil, Ceftin, Keflex, and others)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Kefzol (ကပ်ဖ်ဇိုးလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် B ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။
Kefzol® သည်နို့ရည်ထဲတွင် ပါသောကြောင့် နို့စို့ကလေးကို အန ္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် နို့တိုက်မိခင်ဖြစ်ပါက ဆေးသောက်ခြင်းကို ရပ်လိုက်ပါ။
Kefzol (ကပ်ဖ်ဇိုးလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
မိန်းမကိုယ်တဝိုက်တွင်ယားခြင်း၊ အရည်များထွက်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
အောက်ပါတို့ ခံစားရပါက ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းဆက်သွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဝမ်းလျှောခြင်း (ရေကဲ့သို့သွားခြင်း၊ သွေးဝမ်းသွားခြင်း)
ခံတွင်းနှင့် နှုတ်ခမ်းပေါ်တွင် အဖြူဖတ်များဖြစ်လာခြင်း
အသည်းထိခိုက်ခြင်းကြောင့် ဗိုက်အပေါ်ပိုင်းနာခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ ဆီးမဲမဲသွားခြင်း၊ ဝမ်းအရောင်ဖျော့ခြင်း၊ မျက်လုံးနှင့် အသားများဝါခြင်း
အရေပြားတွင် ဓါတ်မတည့်မှုပြင်းထန်ခြင်းကြောင့် လည်ချောင်းနာခြင်း၊ မျက်နှာ နှုတ်ခမ်းနှင့် လျှာတို့ရောင်လာခြင်း၊ မျက်လုံးများပူစပ်ခြင်း၊ အရေပြားပေါ်တွင် အနီကွက်များဖြစ်ခြင်း၊ အရေပြားနာကျင်ခြင်း၊ ရေကြည်ဖုများဖြစ်ခြင်၊ကွာကျခြင်း
အောက်ပါပြင်းထန်သော ဆိုးကျိုးများခံစားရပါက အရေးပေါ်ဆေးကုသမှု ခံယူရမည်ဖြစ်သည်။
ပြင်းထန်စွာ၊ အဆက်မပြတ် နီရဲခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း ၊ ရောင်ရမ်းခြင်းတို့ဖြစ်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Kefzol (ကပ်ဖ်ဇိုးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
KEFZOL®ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
KEFZOL®ဆေးနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သော ဆေးများမှာ-
Cephradine (Velosef) တို့ဖြစ်သည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Kefzol (ကပ်ဖ်ဇိုးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Bradosol က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Kefzol (ကပ်ဖ်ဇိုးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
KEFZOL®ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင့်တွင်
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းရောဂါ၊ အူရောင်ခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Kefzol (ကပ်ဖ်ဇိုးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အလယ်လတ်နှင့် ပြင်းထန် ကူးစက်ရောဂါများ
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ အကြောထိုးဆေး ဝ.၅-၁ ဂရမ် ၆-၈ နာရီခြား
အပျော့စားအဆင့် gram-positive cocci ကူးစက်ရောဂါ
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ အကြောထိုးဆေး ၂၅၀-၅၀၀ မီလီဂရမ် ၆-၈ နာရီခြား
အလယ်လတ်နှင့် ပြင်းထန်အဆင့် သည်းခြေရောင်ခြင်း
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ အကြောထိုးဆေး ၁ -၂ ဂရမ် ၄-၇ ရက်
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ အကြောထိုးဆေး ၁ ဂရမ် ၁၂နာရီခြား
မခွဲမီ : သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ အသားဆေး/အကြောထိုးဆေး ၁ -၂ ဂရမ် ကိုမခွဲမီ မိနစ်၆၀ အတွင်း (ခွဲနေစဉ် ၂-၅ နာရီခြား ထပ်ထိုးနိုင်သည်။)
ခွဲပြီး : သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ အကြောထိုးဆေး ဝ.၅-၁ ဂရမ် ၈နာရီခြား ၁ရက်
နှလုံးခွဲခြင်း၊ သားအိမ်ထုတ်ခြင်း၊ ခံတါင်းနှင့် လည်ချောင်းပိုင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှု၊ ဦးခေါင်းခွံခွဲခြင်း၊ အဆစ်များ အစားထိုးခြင်း၊ သွေးကြောဆိုင်ရာ၊ရင်ဘက်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ခြေလက်များဖြတ်ခြင်း၊ အနာဒဏ်ရာများ ခွဲစိတ်ခြင်း၊ အန ္တရာယ်များသော အစာရေမြိုပြွန်၊ အစားအိမ်၊ အူသိမ်နှင့် သည်ခြေလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်မှုများ အတွက်သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ အကြောထိုးဆေး ၁ -၂ ဂရမ် ဖြစ်သည်။
အူမကြီးနှင့် စအိုခွဲစိတ်မှုများ အတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ အကြောထိုးဆေး ၁ -၂ ဂရမ် နှင့် Metronidazoile အကြောထိုးဆေး ဝ.၅ ဂရမ် ဖြစ်သည်။
အန ္တရယ်များသော ဗိုက်ခွဲကလေးမွေးခြင်း၊ ကိုယ်ဝန် အလယ်ပိုင်း ကာလတွင် ပျက်ကျခြင်း တို့အတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ အကြောထိုးဆေး ၁ ဂရမ် ဖြစ်သည်။
မျက်လုံးခွဲစိတ်မှုများ အတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ မျက်ကြည်လွှာအောက်တွင် ထိုးရသောဆေး ၁၀၀ မီလီဂရမ် ဖြစ်သည်။
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ အသားဆေး/အကြောထိုးဆေး မခွဲမီ မိနစ် ၃၀ မှ ၆၀ကြား ဖြစ်သည်
သတ်မှတ်ထားသောဆေးပမာဏ ကို ရောဂါဖြစ်သော မျက်လုံးတွင် ၁-၂ နာရီခြား တစက်ချပါ။
ပှံမှန်အားဖြင့်Gram negative ပိုးကောင်များကို နိုင်သော Tobramycin ပိုးသတ်ဆေးကို ကြားထဲတွင် ၁-၂ နာရီခြား တလှည့်စီချပေးပါ။
CrCl 35-54 ml/min: ဆေးပမာဏ အပြည့်ကို ၈ နာရီခြားပေးပါ။
CrCl 10-35 ml/min: ရောဂါအတွက် သတ်မှတ်ထားသောဆေးပမာဏ ကို ၁၂ နာရီခြားပေးပါ။
CrCl ≤10 ml/min: ရောဂါအတွက် သတ်မှတ်ထားသောဆေးပမာဏကို ၂၄ နာရီခြားပေးပါ။
ကလေးတွေအတွက် Kefzol (ကပ်ဖ်ဇိုးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
gram-positive cocci ကူးစက်ရောဂါ
မွေးကင်းစများ (၂၈ ရက်အောက်)အတွက်
၇ရက်အောက် : သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ အသားဆေး/အကြောထိုးဆေး တနေ့လျှင် 40 mg/kg/day ၁၂နာရီခြား
၇ရက်အထက်, ၂ ကီလိုအောက်: သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ အသားဆေး/အကြောထိုးဆေး တနေ့လျှင် 40 mg/kg/day ၁၂နာရီခြား
၇ရက်အထက်, ၂ အထက် : သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ အသားဆေး/အကြောထိုးဆေး တနေ့လျှင် 60 mg/kg/day ၁၂နာရီခြား
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ အသားဆေး/အကြောထိုးဆေး တနေ့လျှင် 60 mg/kg/day ၆-၈ နာရီခြား (တနေ့လျှင် ၆ ဂရမ် ထက်မပိုရ။)
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ အသားဆေး/အကြောထိုးဆေး တနေ့လျှင် 50 mg/kg/day မခွဲမီ မိနစ် ၃၀ မှ ၆၀ကြား (၁ ဂရမ် ထက်မပိုရ။)
အသက် ၃လနှင့် အထက် ကလေးများ အတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ အသားဆေး/အကြောထိုးဆေး တနေ့လျှင် 150 mg/kg/day ၈ နာရီခြား
Kefzol (ကပ်ဖ်ဇိုးလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
KEFZOL®ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
KEFZOL® ထိုးဆေး ၊ cefazoline sodium ၁ ဂရမ်
KEFZOL®ကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Cefazolin.http://reference.medscape.com/drug/Kefzolcefazolin-342492.Accessed November 23, 2016
Kefzol®. https://www.drugs.com/mtm/Kefzol-injection.html.Accessed November 23, 2016
Kefzol. https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO_bjguL_QAhXBLI8KHet9AAgQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.nps.org.au%2F__data%2Fcmi_pdfs%2FCMR02377.pdf&usg=AFQjCNGe_fGbyr19IiDeNIVmbT96PuTXoA&sig2=vqM3Y48VAeaAVf-ZMetcqQ.Accessed November 23, 2016.